Jahawareerka Suuqgeynta ee Ururka Iibka | Martech Zone
Jimco, Juun 17, 2015 Khamiista, Noofembar 5, 2015 Douglas Karr
La shaqeynta shirkadaha tikniyoolajiyadda suuqgeynta waxay na siineysaa fursad aan kula shaqeyno ururo fara badan - oo ka socda shirkadaha waaweyn ee arka sawir aad u weyn isla markaana ka shaqeynaya sidii loo hagaajin lahaa aragtida ay leeyihiin sannado badan - illaa ururka la yaaban sababta taleefankoodu uusan u ahayn bil ku soo gasha maalgashigooda.
Isbarbar dhig aan in muddo ah ku isticmaalay suuqgeyntu waa kalluumeysi. Haddii aad tahay urur iibiya, waxaad kaliya dooneysaa inaad ka soo baxdo biyaha oo aad tuurto hamigaaga. Markasta oo aad haysato ulo aad u badan isla markaana aad dhaqso ugu wada heli karto biyaha dhexdooda, ayaa sii weynaanaya fursadaha ay wax qaniini karaan. Dhibaatadu waxay tahay in kalluunka laga yaabo inuusan joogin halka ay doontaadu joogto, waxaa laga yaabaa inuusan jeclayn sedka aad isticmaaleyso, iyo sida wax soo saar leh sida aad tahay - waxaad guriga ku imaan kartaa adigoo faro maran.
Suuqgeyntu waa geedi socod tijaabo ah, qalad ah, iyo xawaare. Shaqada suuqa waxay tahay inuu barto meesha kalluunku jiri karo, waxa ugufiican ee seddaxdu tahay, ka dibna biyo ku xoqdo si aad u keento kalluunka weyn haddii aysan joogin. Nidaamkani wuxuu jahwareer ku abuuri karaa shirkad si fudud u rumaysan in macneheedu yahay helitaanka iib dheeraad ah ay tahay si fudud wicitaano badan.
Si aan u caddeeyo, ma garaacayo wax soo saarka iibka iyo kaalmaynta iibka. Inaad haysato qof iibiyayaal ah oo ka soo baxa kalluumaysiga biyaha waqtiga saxda ah, qalabka saxda ah, biyaha saxda ah, leh sedka saxda ah… waa xaaladda saxda ah. Kaliya inay halkaa gaarto waqti ayey qaadataa.
Haddii aad tahay kalluumeysato weyn oo aad booqato meel aadan waligaa ka kalluumeysan, waxa ugu horreeya ee aad sameyso waa inaad heshaa hagaha cidda leh. Xitaa kaluumeysatada ugufiican way ogyihiin taas, hadii ay doonayaan inay guuleystaan, helitaanka hagaha saxda ah ayaa siin doonta iyaga fursada ugufiican ee ay kusoo dagi karaan kaluunka ay daba socdaan. Dad badan oo iibiya ayaa sidoo kale aqoonsanaya tan. Dadka iibka weyni waxay jecel yihiin inay la shaqeeyaan suuqleyda si ay ugu sheegaan waxa sedku shaqeynayo, waxa aan ahayn, iyo haddii kalluunka waaweyni qaniinayaan.
Suuqgeyntu waa sheydan layaabka leh ee ku saabsan ururka iibka wada ee aan waligiis horay u sameynin. Way ogyihiin markay maqan tahay, laakiin ma ogaan karaan sida loo qiyaaso kharashka maxaa yeelay si sahal ah uguma habboona xaashiyaha sida wicitaannada iyo xiritaankuba sameeyaan. In kasta oo aan si daacadnimo ah isugu dayeyno inaan iska ilaalino la shaqeynta hay'adaha iibka keena, markay runti nagu riixaan, waxaa lagama maarmaan ah inaan siino xiriir weyn iyo ka warbixinta tilmaamayaasha hoggaamineed ee ay dhibcaha ku xiri karaan.
Wadaagga Codka - inta badan ururada iibku riixo waxay ogyihiin inay u baahan yihiin suuq geyn waa markay dhagaystayaashu had iyo jeer ka hadlaan tartankooda oo aysan jirin wax badan oo ka sheekeeya astaamahooda, wax soo saarkooda ama adeegyadooda. Ka faa'iideysiga aaladda kormeerka tixraacyada oo leh warbixin wanaagsan waxay bixin kartaa warbixinno muujinaya mugga cusub ee buuq ku saabsan shirkaddaada iyo tartamayaashaada. Waxay sidoo kale mugga gelin doontaa aragtida waxayna muujineysaa nooca dadaalka ee ay wadaan tartamayaashaadu inay tahay inaad la dagaallanto.
Taageerida Qalabka iibka - waxaan la shaqeyneynay hay'ad wax iibisa oo aan ka shaqeynay meelahooda marka hore, ka dibna waxaan u soo saarnay waxyaabo si heer sare ah u calaamadeysan kooxahooda iibka. Dhibaatadu waxay ahayd inaysan ku darin xubnihii kooxda dhabta ahaa wada hadalka months markaa bilo kadib waxaan iska qornay demo oo waxaan aragnay inaan indha indheynayno iibiyeyaasha awooddiisa la isticmaali jiray kahor shaqadeena. Calaamadda si fiican looma dhigin, sawirada iyo astaamaha ayaa ka dhigtay inay u ekaadaan mashruuc dugsi sare ah, iibkuna wuxuu sii waday hoos u dhacooda. Ilaa ay kooxdaada iibka ahi iibsadaan mooyee, ay wax ku barteen meelayntaada, oo ay uga faa'iideysanayaan qalabkaaga suuq-geynta habka iibka investment maalgashigaaga suuq-geyntu wuxuu ka soo horjeedaa istaraatiijiyadaada iibka.
Saamiyada iyo Darajada - waa ra'yigeyga in algorithms-ka Google ay yihiin kuwa ugu casrisan adduunka marka la eego qiimeynta kheyraad awood leh oo leh mawduuca isticmaale uu raadinayo. Kala-saariddu waxay u baahan tahay sii socoshada sii socota ee dhawaanahan, waxyaabaha soo noqnoqda ee ku habboon ee lagu wadaago khadka tooska ah. Haddii aadan soo saareynin waxyaabo aad u wanaagsan, ma ahan in la wadaago. Haddii aysan la wadaagin, ma darajaynayso.
Akhlaaqda martida - markaan la shaqeyno ururada iibka wada, waxsoosaarkeena iyo diiradeena badiyaa waxay ka badalataa qori caaradii oo ku biira koox gaar ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in mugga dhabta ah ee soo-booqdayaasha laga yaabo in lagu yareeyo goobta, laakiin booqdayaasha ku habboon ayaa kordha. Waxaan daawan doonnaa bogagga booqashadiiba, heerka ka bixitaanka iyo soo degista bogagga degitaanka, iyo imisa diiwaangelinno iyo diiwaangelinno dhacaya.
Saadaasha Dadweynaha iyo Firmographics - Miyuu suuqgeynta wax ka beddelayaa tirakoobka dadka (B2C) ama firmographics (B2B) ee hoggaamiyeyaasha suuqgeyntaadu soo jiidaneyso? Waqti ka dib miyuu isbeddelayaa? Haddii kooxdaada iibku ay leeyihiin macmiil ku habboon, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad qiyaasto in tilmaamaha aad helayso ay u dhowdahay ugana dhowaanayaan macmiilka habboon ee ay raadinayaan.
Iibinta - Jooji u adeegsiga astaantii ugu dambeysay ee iibka oo bilow inaad muujiso waxa dadaalka suuq-geynta uu taabtay rajo kasta. Awood u lahaanshaha falanqaynta macluumaadka ay soo galeen, ama bogga ay ka heleen raadinta, ama warqadda cad ee ay soo dejiyeen, ama rukunka ay ka jawaabeen ayaa kaa caawin doona inaad si fiican u fahamto sida dadaalkaada suuqgeynta ay saameyn ugu yeesheen iibka. Kooxda iibinta weyn iyo taleefan ayaa xiri doona ganacsiyo badan, laakiin koox iib ah oo weyn oo wicitaan rajo leh oo waxbartay oo ay saameyn ku yeelatay istaraatiijiyadaada suuqgeynta ayaa si fiican u xirmaya.
Ku wargalinta kuwan tilmaamayaasha hogaaminaya si wax ku ool ah ayaa gacan ka geysan doonta in la fududeeyo hay'adda iibinta wada. In kasta oo ay weli ka xanaaqi doonaan in taleefankoodu uusan ka soo yeerin suuq-geynta suuq-geynta ee mumbo-jumbo ee aad sameyneyso… ugu yaraan waxay arki doonaan xawaaraha aad abuureyso. Codsigana safka isbeddelka rajooyinka mustaqbalka waa inay ka dhigtaa kuwo rajo ka qaba in - kaliya maahan suuq-geynta inay gacan ka geysan karto iibintooda dadkooda iibinta xirmooyinka badan - waxay aqoonsan doonaan inay ka caawisay iyaga inay xiraan heshiisyo badan iyo heshiisyo waaweyn oo leh dadaal yar.
Suuqgeyntu waxay shaqeyn doontaa muddo dheer ka dib maalgashiga. Weli waxaan haysannaa waraaqo caddaan ah oo aan u horumarinay macaamiisha 4 sano ka hor oo sii wadaya iibinta ururo badan. Tani waa muhiim in la xasuusto. Haddii aad joojiso lacag bixinta wakiilkaaga iibka berri, taleefanka ayaa istaagaya inuu soo dhaco. Haddii aad joojiso maal-gashiga suuq-geynta, waxaad sii wadi doontaa inaad kasbato faa'iidooyinka inkasta oo ay hoos u dhacayaan waqtiga. Maalgashigaaga ugufiican waa labada - iyo had iyo jeer inaad adeegsato xeelado suuq geyn joogto ah si aad uhesho xawaare isla markaana aad usii wado hoos u dhigida qiimahaaga helitaan kasta, qiimaha kor u kaca, kordhinta haynta, kordhinta hadalka afka, iyo kororka iibka.
Tags: dhacatilmaamayaasha hogaaminayadarajeeyoiibinta abaabulka ururkaqalabka iibkaiibinta iyo suuqgeyntasaami qaybsigasaamiyada bulshadataageerida iibka